ne admin pane 21-02-07
Mushure menguva refu yekuvandudza muindasitiri yemakenduru, isu Winby kenduru yakaunganidza vatengi vazhinji uye takagamuchira kurumbidzwa kwakakwirira kubva kunyika zhinji. Izvi zvinotevera kuziva kwevamwe vatengi kwezvigadzirwa nemasevhisi. Is izvi zvinotyisa, uye ini ndakaedza kune yangu kenduru ...
Takaita musangano wedu wepagore svondo rapfuura, yaive nguva inonakidza, iyo munhu wese wedu achiri kugona kuyeuka. Yakarongeka yakagadzirirwa kumashure bhodhi yemusangano wepagore. Wese munhu akapfeka uye anofamba achipfeka dzakapfeka naka. Hakuna here pfungwa yekukurumidza nezve hombe s ...
Winby kenduru kambani ikambani ine hunyanzvi kugadzira makenduru ane hwema, zvirongo zvemakenduru, kenduru yembiru uye kenduru yeunyanzvi. Isu takatora chikamu muCanton Fair kwemakore mazhinji, uye takwezva vatengi vakawanda kubva kunyika zhinji pasi rese. Parizvino, isu tichiri kunyanya ...